Nhau - Iyo iripo tekinoroji yemudziyo bhegi FIBC yekucheka muchina ine anotevera matambudziko
FIBC yekucheka muchina inozivikanwawo seyakagadziriswa mudziyo bhegi, bhegi yetoni, bhegi repakati, nezvimwewo bhegi remudziyo rizere neyakajairika bhegi bhegi, inozivikanwawo sehombodo hombe uye bhegi rekutakura. Iyo mhando yakapfava uye inochinjika yekupakira mudziyo, uye ihombe hombe vhoriyamu yekutakura bhegi yakagadzirwa neakapeta inonamira tepi, resin yekugadzirisa machira uye zvimwe zvakapfava zvinhu. Inowanzo gadzirwa ne polypropylene kana polyethylene ne extrusion, kucheka, kudhirowa, kuruka, kucheka nekusona. Rudzi urwu rwekutakura harungobatsira chete pakuvandudza kurodha uye kuturura mashandiro, asi zvakare inokodzera kurongedzwa kweupfu hwakawanda uye zvigadzirwa zvegranular. Inogona kusimudzira kuenzanisa uye serialization yehombe yekutakura zvinhu, kudzikisa mutengo wekufambisa, uye ine zvakanakira kurongedza zvirinyore, kuchengetedza uye mutengo wakaderera. Inonyanya kukodzera mashandiro emuchina. Iyo sarudzo yakanaka yekuchengetedza, kurongedza uye kutakura. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumugwagwa, njanji uye kutakurwa kwegungwa kwezvinhu zvakawanda senge simendi, fetiraiza, munyu, shuga, kemikari mbishi zvigadzirwa, ores uye zvimwe hombe zvinhu. Naizvozvo, mumakore achangopfuura, mabhegi emidziyo anoshandiswa zvakanyanya kutakura hupfu uye granular nhumbi munyika. Kuonekwa uye kushandiswa kwemabhegi akachengetedzwa ndeyemhando yepamusoro munzira yekutakura uye kuturura hupfu uye zvinhu zvine granular.
Iyi tekinoroji iripo ine matambudziko anotevera: kana chiripo chiripo chekucheka michina yemudziyo bhegi kugadzira ichiiswa, pane dambudziko rekuti jira rehombodo yemudziyo bhegi yekucheka muchina haina kugadzikana yakasimba kana ichicheka, zvichizounza dambudziko remhando yekuveura, uye panguva imwecheteyo, jira rekuburitsa bhegi rinogona kusununguka panguva yekuveura, zvichikonzera kuwedzera kwehukuru uye kuderera kwehunhu.
Iyo yekushandisa modhi inopa FIBC machira ekucheka michina yemudziyo bhegi kugadzira, iyo ine hunhu hweyakareruka chimiro, kutsunga kwakasimba uye nyore kukakavara.
Kuti uwane icho chiri pamusoro chinangwa, iyo yekushandisa modhi inopa inotevera yehunyanzvi scheme: jira rekucheka michina yemidziyo bhegi kugadzira, iyo inosanganisira tensioning roller, tafura yekugadzirisa uye chakasarudzika chinhu. Kumusoro kwekumusoro kwetafura yekugadzirisa yakatarwa neyakagadzika furemu, iyo yekumusoro yekupedzisira yeiyo inosimudza furemu inopihwa neinokonzeresa roller kune ese mativi, iyo yepakati yekumisikidza furu yakagadziriswa ne telescopic cylinder, uye yepazasi magumo eiyo pisitoni tsvimbo yeteresikopu humburumbira yakagadziriswa nekucheka Mugumo wepazasi petafura yekugadzirisa unopihwa mota yekutyaira, iyo yepakati yekumusoro kwekupedzisira kwetafura yekugadzirisa inopihwa nechinhu chakamisikidzwa, uye mativi maviri echikamu chakamisikidzwa. akagadziriswa ane irikupa chinotenderera.